WEBTOON 2.1.13 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.13 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ႐ုပ္ျပမ်ား WEBTOON
WEBTOON ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တွေ့ဆုံ WEBTOON ™။ ကျနော်တို့ပုံပြင်များကိုဖန်တီးရန်တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကလမ်းစတင်ပြောပြရန်တစ်ဦးပုံပြင်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှရန်သူကဖွင့်လှစ်။ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအံ့သြဖွယ်, ကွဲပြားခြားနားသောရူပါရုံနှင့်အတူဖန်တီးသူပိုင်အကြောင်းအရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အိမ်ပါပဲ။ ကြီးမားသောအမည်များနှင့်ပဲ WEBTOON ™ဘို့လုပ်ခံရဖို့ကြီးတွေအမည်များမှနောက်ဆုံးမူရင်းအချစ်ဇာတ်လမ်း, ဟာသ, အက်ရှင်, စိတ်ကူးယဉ်, ထိတ်လန့်နှင့်ပိုပြီးတွင်ရယူပါ။ ကျနော်တို့အချိန်မရွေးနှင့်အစဉ်အမြဲအခမဲ့အဘို့, ဘယ်နေရာမှာမဆိုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုပင်လျှင် WEBTOON ™ကိုချစ်? Instagram ကို, Facebook, YouTube, နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါနဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းသန်း 50 ကျော်စာဖတ်သူများတစ်အသိုင်းအဝိုင်း join ။
ပြင်ပသိုလှောင် (Optional): ခွင့်ပြုချက်များသင့်ရဲ့ device မှဖြစ်စဉ်များဒေါင်းလုပ်ဘို့လိုအပ်သည်။
* သင်ကဒီခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုမပါဘဲ WEBTOON သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
WEBTOON အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
WEBTOON အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
WEBTOON အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
WEBTOON အား အခ်က္ျပပါ
smurphstore စတိုး 92 36.38k
WEBTOON ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ႐ုပ္ျပမ်ား အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း WEBTOON အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.1.13
ထုတ်လုပ်သူ NAVER Corp.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://m.webtoons.com/en/terms#privacyPolicy
App Name: WEBTOON
Release date: 2019-07-19 17:45:46
လက်မှတ် SHA1: 08:68:8A:E1:48:F5:7B:5C:DC:3F:D6:FA:52:BC:64:9F:06:39:01:00
ထုတ်လုပ်သူ (CN): sungho park
အဖွဲ့အစည်း (O): nhn
နယ်မြေ (L): seong nam
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): kyoung gi do
WEBTOON APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ